कुन राशिका महिलाको सेक्स स्वभाव कस्तो ? - IAUA
कुन राशिका महिलाको सेक्स स्वभाव कस्तो ?
ramkrishna December 30, 2016	कुन राशिका महिलाको सेक्स स्वभाव कस्तो ?
सेक्स’ सन्तान उत्पादनको प्राकृतिक नियम भएपनि यसलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । महिला र पुरुषबीचमा स्वभाविक रुपमा हुने आकर्षण अन्ततः सेक्समा परिणत हुन्छ । यसले शारीरिक र मानसिक वा भौतिक र आध्यात्मिक सुख दिन्छ । सेक्सले सन्तुष्टि पनि दिन्छ जसले मान्छेको दैनिक क्रियाकलापदेखि दीर्घायुसम्मलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । तर सेक्सले विकृत रुप धारण गरेमा समाजमा अपराध, हिंसा र विद्रोह सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक मान्छेले आफ्नो सेक्स जीवनलाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ ।
मेषराशिः यो राशिका महिलाको मुख र निधार एकदमै संवेदनशील हुन्छ । तपाईंले मुख र निधारमा चुम्बन गर्नु भयो भने उनीहरु चाँडै सेक्सको लागि तयार हुन्छन् वा महिलामा चाँडै यौन उत्तेजना बढ्दछ । साथै मेषराशिका महिलाहरु रातो रङप्रति ज्यादै आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले यदि तपाईंको सेक्स पार्टनर मेषराशिकी छिन् भने यौन क्रियाकलाप गर्नु भन्दा अगाडि रातो रङको कपडा लगाउनु होस् ।
वृषराशिः यो राशिका महिला जति धेरै रोमान्टिक हुन्छन् त्यति नै धेरै समय यौन क्रियाकलापमा राजी गराउन समय लाग्दछ । त्यसैले तपाईंको सेक्स पार्टनर वृषराशिवाला छन् तर तपाईं चाँडै यौन क्रियाकलाप गर्ने सोच्नु हुन्छ भने तपाईंले दुःख पाउनु भयो अर्थात् तपाईंको यौनजीवन त्यति सहज हुने छैन जति तपाईं सोच्नु हुन्छ । वृषराशिका महिलाको गर्धन निक्कै संवेदनशील हुन्छ त्यसैले सेक्स गर्नुअघि गर्धनमा चुम्बन वा स्पर्श गर्नु भयो भने निक्कै चाँडै उत्तेजना पैदा गर्न सक्नु हुन्छ । साथै यो राशिका महिला महङ्गा गहना लगाउन मन पराउने भएकाले सेक्सको लागि रिझाउन महङ्गा गहना खरिद गरिदिने पनि गर्न सक्नु हुन्छ तर आफ्नो खल्ती चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला ।
सिंहराशिः सिंहराशिका महिलालाई बनावटी कुराहरु वा देखावटी सौन्दर्य र चिजबस्तुहरुप्रति निक्कै आकर्षण हुन्छ । यिनीहरु रोमान्टिक वातावरणमा चाँडै र सजिलै घुलमिल हुनसक्छन् । यो राशिका महिलाहरु आफ्नो पार्टनरलाई आफूमाथि हावी हुन भने दिँदैनन् । यिनीहरुको पिठ्युँ सेक्सको लागि निक्कै संवेदनशील हुन्छ ।
कन्याराशिः यो राशिका महिला आफ्नो यौन इच्छालाई चाँडै बाहिर निकाल्न चाहँदैनन् तर भित्र भने सेक्सको भोक निक्कै हुने गर्दछ । यिनीहरुलाई पेटमा किस गर्न निक्कै मन पर्दछ । यौन सम्पर्क गर्नु भन्दा अघि उनीहरुलाई पेटमा स्पर्श गर्ने वा छुने गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
Previous Previous post: ओंठमा कोठी हुने मानिस किन हुन्छन् शारिरीक सम्बन्धका प्यासी
Next Next post: यस्ता छन् किशाेरीकाे बारेमा पत्ता लागेका तथ्यहरू